के हो ६ मिनेट ‘वाक टेस्ट’ ? तपाईंको अक्सिजन लेभल र फोक्सोको लोड यसरी थाहा पाउनुहोस् « News24 : Premium News Channel
के हो ६ मिनेट ‘वाक टेस्ट’ ? तपाईंको अक्सिजन लेभल र फोक्सोको लोड यसरी थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को दोस्रो लहरको चपेटामा अहिले नेपाल, भारत लगायत धेरै देश नराम्ररी थलिएका छन् । भारतमा र नेपालमा पनि अक्सिजन र अस्पताल बेड नपाएर धेरैको ज्यान गयो । संक्रमणपछि अक्सिजनको कमीका कारण मानिसहरूको मृत्यु बढी भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कोरोनाले फोक्सोमा गम्भीर असर र्पुयाउने र फोक्सोको संक्रमणको समस्या बढ्ने गर्छ । सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, जसको कारण मानिसहरु अक्सिजन तान्न नसकेर मर्दछन् । डाक्टरहरूका अनुसार जो मानिस कोरोनाभाइरसबाट पीडित छन् वा पहिले पीडित थिए, उनीहरूले आफ्नो अक्सजिनको स्तर बेलाबेला जाँच गर्नु पर्दछ ।
अहिले भारतमा सरकारले नै नागरिकहरुलाई अक्सिजन लेभल जाँच गरिरहन सल्लाह दिइरहेको छ । घरमै बसेर सजिलोसँग आफ्नो अक्सिजन लेभल र फोक्सोको लोड धान्ने क्षमता/अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । यसका लागि ६ मिनेट वाक टेस्ट (पैदल परीक्षण) गर्न भारतमा सल्लाह दिइएको छ ।
महाराष्ट्र राज्य सरकारले प्रशासनलाई ६ मिनेट पैदल परीक्षण गराउन निर्देशन नै गरिसकेको छ । भारतमा अहिले यसबारे जनचेतना जगाउने सन्देश, भिडियो, पोस्टरहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरिँदैछ ।
‘इन्डिया फाइट कोरोना’ नामक भारत सरकारको आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डमा यसैबारे एक भिडियो सामग्री राखिएको छ । उक्त सामग्री भारतकाे सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले तयार पारेकाे हाे । यसमा कोरोनाको लक्षणबाट पीडित व्यक्तिहरुलाई ६ मिनेटको पैदल परीक्षणबारे तरीकाहरु सुझाइएको छ ।
कोरोनाभाइरसको बढ्दो गतिलाई ध्यानमा राख्दै, तपाईंले पनि आफ्नो अक्सिजन स्तरको बारेमा सही जानकारी प्राप्त गर्न ६ मिनेटको पैदल परीक्षण गर्नैपर्छ । त्यसो भए ६ मिनेट पैदल परीक्षण कसरी गर्ने त ?
यसरी परीक्षण गर्न सकिन्छ
तपाईंको शरीरको अक्सिजन लेभल (स्तर) सही छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन तपाईंको चोरऔंला वा माझी औंलामा अक्सिमिटर राख्नुहोस् । अक्सिमिटर एक उपकरण हो, जुन मेडिकलहरुमा किन्न पाइन्छ ।
सुरूकाे अक्सिजन लेभल टिपाेट गर्नुहाेस् ।
त्यसपछि अक्समिटर औंलामा लगाइराखेकै अवस्थामा ६ मिनेटसम्म एकैनासले लमक-लमक हिड्नुहोस् । काेठाभित्रै या घरकै वरपरकाे शान्त वातावरणमा समान पदचापमा हिड्नुहाेस् ।
६ मिनेटपछि अक्सिजनको लेभल (स्तर) पुनः टिपाेट गर्नुहाेस् । यदि अक्सजन लेभल कम भएन भने तपाइँ स्वस्थ नै हुनुहुन्छ ।
यदि ६ मिनेट हिडिसकेपछि तपाईको अक्सिजन स्तर सुरुको (नर्मल लेभल) भन्दा १ वा २ प्रतिशतले खस्छ भने आत्तिनु पर्दैन । यो नर्मल नै मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा एक दिनमा १ वा २ पटक व्यायाम गर्नुपर्छ ।
३-४ प्रतिशतभन्दा तल झरेमा वा ९४ प्रतिशतभन्दा कम भएमा चिकित्सककाे परामर्श लिनुपर्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अक्सिजनको स्तर ९३ प्रतिशतभन्दा कम भएमा व्यक्तिलाई सास फेर्न गाह्रो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा तुरून्त चिकित्सकको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ ।
डाक्टरका अनुसार ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूले भने ६ मिनेटको सट्टामा ३ मिनेटको पैदल परीक्षण गर्नुपर्दछ । तर ७० वर्षमाथिका वृद्ध र गर्भवती संक्रमितले याे परीक्षण नगर्न सल्लाह दिइएकाे छ ।
यसरी घरमै सामान्य परीक्षण गरेर तपाई कत्तिको स्वस्थ हुनुहुन्छ र तपाईमा कोरोनाभाइरसको भार कति छ भन्ने कुरा डाक्टरलाई समेत पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ ।
तर, यसरी पैदल हिड्नुपूर्व केही हल्का भोजन गर्नु राम्रो मानिन्छ । भोको पेटमा हिँड्नु हुँदैन भनेर सल्लाह दिइएको छ । अशक्त अवस्थामा लट्ठीको सहारामा पैदल हिँड्न सक्नुहुन्छ ।
थप भिडियाेमा हेर्नुहोस्-
?6 Minutes Walk Test
इलाममा थप २४ जनामा कोरोना संक्रमण
विनय तिम्सीना, इलाम । मुलुकभर कोरोना संक्रमणको ग्राफ घटिरहेको अवस्थामा इलाममा भने संक्रमणदर घटेको छैन
प्रदेश १ मा थप १७९ जनामा कोरोना पुष्टि, ३ जनाको मृत्यु
तारा आचार्य, विराटनगर । प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा १७९ जनामा कोरोना संक्रमण भएको
मुलुकभर थप ८३४ जनामा कोरोना पुष्टि, ९ संक्रमितको मृत्यु
काठमाडौं । मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा ८ सय ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ
सुदूरपश्चिम : ४१ जना कोरोना सङ्क्रमणमुक्त, एकको मृत्यु
बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप २१ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।